Sidee in la wado ee USA | macluumaad ku saabsan wadista dadka cusub | USAHello
Si aad u bilowdo wadista ee America, waa in aad barato sidii aad u ammaan ah eryi iyo gudubto imtixaanka muujineysa in aad taqaan sharciyada wadidda US. gobolka kasta oo aad u baahan tahay si aad u hesho laysanka darawalnimada haddii aad ku talo jirto driving. Haddii aad u guurtid gobol kale, waa in aad is dhaafsadaan liisanka jir liisan cusub ee gobolka in. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah wax muhiim ah in la ogaado oo ku saabsan sida loo wado ee USA.
Qaadashada laysanka darawalnimada
Waa sharci daro in la wado liisanka wadista iyada oo aan. Gobol kasta ee Maraykanka waxay leedahay sharciyo kala duwan driving. Waxaad baran kartaa sharciyada by reading US a Buugga darawalnimada oo ku qoran luqado badan. Waxaad sidoo kale u baahan doonaa in uu akhriyo dhabta ah buugagan darawalka ee gobolkaaga.
Marka aad akhriyay oo aan fahmay sharciyada, waxaad u baahan doontaa inaad qaadato labada imtixaan qoraal ah iyo imtixaanka wadista si aad u hesho liisankaaga. Waxaad u baahan doontaa inaad u balansato imtixaan this ka hor wakhtiga. Waxaad tegi kartaa online ama booqo ama wac xafiiska DMV in uu yahay ugu dhow gurigaaga. Waxaad u leeyihiin in ay bixiyaan lacag si ay u qaataan baaritaanka iyo aad u hesho liisankaaga. Gobolo badan u oggolaadaan in aad imtixaanka afkaaga hooyo.
caymiska baabuurka daboolayaa kharashka haddii ay dhacdo shil ama dhaawac. Sharcigu wuxuu u baahan yahay caymiska aasaasiga ah ee baabuurta oo dhan ay dhacdo in darawalka dhaawacay qof ama waxyeelo qof kale hantida. Waxa kale oo aad ka heli kartaa caymis si ay u daboosho kharashka dhaawaca ku baabuurkaaga, iyo xadida baabuurta.
Waa in aad haysataa ugu yaraan caymiska baabuurta ee aasaasiga ah si ay u si sharci eryi. Xitaa haddii aad wadid gaari saaxiib ee, waa adiga masuuliyadaada si loo hubiyo in gaariga aad wadid waa caymis. document caymiska The waa in lagu hayaa ee gaariga si ay u muujiyaan haddii aad joojiyey by booliska.
diiwaangelinta baabuurka waa canshuur bixisay sannad kasta gobolka. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad in ay qaataan gaariga wadada iyo bixinaya taargooyinka liisan aad. Ma aha sharci in la wado baabuur ah oo aan ka diiwaan gashan. warqadda diiwaangelinta The waa in lagu hayaa ee gaariga si ay u muujiyaan haddii aad joojiyey by booliska.
Ammaanka iyo driving Talooyin
USA ayaa waxay leedahay sharciyo aad loo ilaaliyo inta aad wadid. Waa inaad mar kasta raac sharciyada. Sharciyada waxaa laga yaabaa in uu ka duwan yahay wadankaada hooyo. Waxaad u baahan doontaa in ay bartaan sharciyada gaarka ah ee gobolkaaga. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah xeerarka muhiim ah ammaanka in dalalka ugu baahan:
• kuraasta baabuurta
Dhallaanka iyo carruurta waa inay fuulaan kursiga gaariga ku haboon si ay size in ay yihiin aasa si ammaan ah baabuurka. caruurta da'doodu ka joojin karaa iyadoo la isticmaalayo kuraasta baabuurta kala duwan ee gobolku. Haddii aadan hubin, la xiriir xafiiska DMV ee xaafaddaada. Marna qaban ilmaha aad dhabta halka baabuur-wadidda ama la saaran yahay gaadhi; waa labada khatar ah oo sharci-darro ah.
Waa in aad suunka gaariga la xirto halka baabuur ama gaari fuulida ah ee Maraykanka. Qof kasta oo gaadhigu waa inay xidhaan suunka, haddii wadista ama fuushan sida rakaab ah. Sababtuna waxay tahay, in, shil, dadka aan suunka duuli kari waayeen kuraasta ay, naftooda iyo dadka kale ku dhaawacmeen.
Haddii aad fuushan ama wadista mootada, waa in aad xidho koofiyad. Ku dhawaad ​​gobol kasta in USA ay u baahan tahay baaskiilayda inay xidhaan koofiyada.
lama ogola in aad khamri cabto ka hor ama halka baabuur-wadidda. Tani waa mid aad u muhiim ah, sababtoo ah waxaad ku waayi kartaa liisankaaga haddii aad cabto iyo eryi iyo waxaa looga baahan yahay inuu bixiyo ganaax weyn ama xataa u adeega muddo xabsi ah. Waxa kale oo aad si dhab ah dhaawici kara ama dilo qof haddii aad cabto iyo drive.
• telefoonnadii iyo jeediya kale
Waa sharci darro in ay ka hadlaan on your phone halka aad wadid in dalalka qaar ka mid ah Maraykanka. Qoraalka waa la mamnuucay in ku dhowaad dhammaan gobolada. Telefoonada gacanta idin ka shuqlinin karo wadada. Haddii aad u baahan tahay in la isticmaalo telefoonka, waa in aad soo jiid ka badan. Tiro sii kordhaysa ee magaalooyinka Maraykanka waxaa diidaya jeediya kale, sida cunidda, kafeega la cabbo, ama ka qayb qaataan si xayawaanka.
• Carruurta ee baabuurta
aan guud ahaan loo oggol in aad carruurtaada ka tago in gaariga markii aad tahay ma in gaariga. Tusaale ahaan, haddii aad u tagto galay dukaan, waa inaad carruurtaada aad la keeno. Haddii carruurtu ay keligiis ayuu hadhay, ay ku dhaawacmeen yaabaa isku dayaya in ay ka baxaan, sii daayo jejebiyey ama xajin, kululaado ama talaagada, gurig kaa xidhaya, ama tag la'yahay.
• Driving marka daal
Ha kaxeyn haddii aad daalan tahay. Haddii aad ku jirto gaariga iyo garasho aad uga daasho in la wado, signal oo u durji meel amaan ah, halkaas oo aad aan shaygu gaadiidka oo aadan khatar. On jidka weyn waxaa loogu talagalay meelaha intiisa kale. Had iyo jeer quful albaabada inta aad seexato.
• yeerinta iyo buuqa kale
Iska ilaali isticmaalka geeska haddii uu jiro walaac ammaanka. Meelaha qaarkood, waa sharci darro in la isticmaalo geeska baahneyn ama inta lagu jiro saacadaha qaarkood. Isticmaalka idaacadaha cod weyn ayaa sidoo kale niyad ama sharci-darrada ah ee meelo ka mid.
• qufulo iyo furayaal
xatooyo Vehicle iyo xatooyo ka baabuurta waa dhibaato in meelaha qaar ka mid ah. Waxaa muhiim ah in aad xirtid albaabada gaariga aad, xitaa halka gaariga, oo waxay qaadan doonaan furaha marka aad ka tagto. Ka saar qiimaha leh ka view.
• Xayawaanka in baabuurta
Haddii cimilada uu yahay mid aad u kulul ama aad u qabow sida caadiga ah ka sarreeya 70 ° F ama ka hooseeya 40 ° F, waa fikrad xun yahay inuu ka tago xayawaanka gaariga xataa la daaqadaha furan, maxaa yeelay, waxay u dhiman kartaa. Xayawaanka ayaa la ogaaday inay quful darawalka ka soo baxay oo baabuur, sidaas darteed mar walba muhiim ah oo aad ku.
Haddii aad hesho shil halka aad wadid, waa in aad joojiso. Ha ka tagin goobta shilka oo aan istaagin. Haddii aad gaariga waa uu weli ka shaqeynayo, isku day in aad soo jiid off ee wadada. Haddii qof dhaawacmo, waa in aad wacdaa 911 isla markiiba.
Haddii mid ka mid ma waxaa loo yeelin, waa in aad ku qorto magaca, lambarka taleefanka, cinwaanka, Lambarka liisankaaga darawalnimada, liisanka iyo taarikada gaadhiga, iyo macluumaadka caymiska ee qofka aad ku dhacay ama kan kugu dhuftay. Haddii ay jiraan dad ku markhaati ka (miinshaar) shilka, Sidoo kale waa in aad u ururiyaan magacyada iyo lambarada telefoonadooda. Haddii aad qabto camera a, aad sawirada wax kasta oo waxyeello u qaadan kartaa. Sidoo kale waa inaad ku qor meesha uu shilka iyo sawirada meesha uu sidoo qaado.
Ka dib markii uu shil ka, Waa in aad soo sheegtid shil ah shirkada caymiska isla markiiba.
Wadista ee cimilada xun
Iyadoo ku xiran meesha aad dib u dejin dalka Maraykanka, cimilada waxaa laga yaabaa in aad u kala duwan ka in dalkaagii hooyo. Waxaa laga yaabaa in markii kuugu horeysabaa wadista yihiin xaalado adag.
Haddii wadada waa baraf ama barafka, waa inaad ka fogaataa wadida. Haddii ay noqoto in aad baabuur, si tartiib ah u tagaan oo ay isticmaalaan Taayirada baraf ama silsilado on Taayirada aad. Waxay kaa caawin karaan inaad joojiso fiican baraf ama barafka.
Boorso Xirmada degdeg ah in gaariga ay ku jiraan waxyaabaha ammaanka, sida qalabka gargaarka degdegga ah, dhar diiran dheeraad ah, biyaha, silsilado, majarafad barafka ah, iyo toosh.
cadhoodeen Road waa erey si uu u sharaxo dadka cadhada dareemaan marka ay eryi. Dadka laga yaabo guuxi ama Honk ama la wado in la xiro haddii ay yihiin cadhooday saabsan driving. Haddii aad ogaato inaad qalad sameeyay markii aad baabuur wadayso, aad ruxruxaa karaan si ay u muujiyaan qofka aad tahay ka xumahay. Haddii qof uu u cadhoodeen wadada iyo waa idiin cadhooday at, aadan ka jawaabin. Isku day in aad kaliya sii wadida sida degan ee suurtogalka ah oo ka soo baxa jidkooda. Ha ka hortagaan ama ka doodid darawalka xanaaq, oo ha wadin markii aad cadhootid ama xanaaqsan. Driving qaadataa badan oo fiirsashada iyo samir.
Ma idiin tahay wakhti aad ugu horeysay gadashada baabuurka ah ee USA? Gadashada baabuur waa ballanqaad dhab ah. Waxaan ku talinaynaa in aad leedahay saaxiib ah oo American ama mentor kaa caawin markii ugu horeysay ee aad soo iibsato baabuur. Waxaad mararka qaarkood amaah ah ka bangiga ama credit union ka heli kartaa si aad u iibsato baabuur. Laakiin haddii aad heshid dayn, waxaad bixin doontaa dan u ah oo ku saabsan bil kasta si gaariga ku kici doona in ka badan haddii lacagta aad ku badbaadi si aad u iibsato iyadoo kaash ah.
Marka aad bixisay ee gaariga ama fasax lacag aad amaah si buuxda u, waxaad ka heli doonaa “horyaalka” in gaariga - dokumentiga rasmiga ah caddaynaya aad u leedahay.
Sidee si ay u iibsadaan baabuur
Waxaa guud ahaan ka jaban si ay u iibsadaan gaari loo badan baabuur cusub. Waxaad ka milkiilaha ama ka ganacsada baabuur ka iibsan kartaa gaari loo. Waxaad kala hadli kartaa qiimaha. Haddii aad iibsaneyso gaari loo, waa fikrad wanaagsan in aad eegtid makaanik ee gaariga ka hor inta aadan iibsan si loo hubiyo in wax qalad ah ay la gaari waa. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa in tijaabisid baabuurka. Taas macnaheedu waxa weeye in aad ku qaadan doonaa drive a iyo hubiyo si loo hubiyo in wax walba oo ka shaqaynaysa marka aad iibsanayso.
Marka aad soo iibsato baabuur loo isticmaalay, aad u baahan tahay si aad u hubiso in gaariga “horyaalka” (taas oo muujinaysa cadeyn u tahay in qofka aad u iibsato laga leeyahay) waa cad. Waa in aad hesho horyaalka gaariga nootaayo (si rasmi ah u saxiixay) iyo in la hubiyo in aad hesho rasiidka, xitaa haddii la gacan-ku qoran, ka milkiilaha gaariga.
Shuruudaha iibsashada iyo lahaanshaha baabuur
Si aad u iibsato baabuur, waxaad u baahan doontaa liisan darawalnimo ee.
Waxaad haysan doontaa in ay iska diiwaan gaariga la waaxda gaadiidka ee gobolka si aad u hesho taargooyinka liisan, oo waxaa looga baahan yahay.
Waxaad sidoo kale yeelan doonaan in ay bixiyaan caymiska bil kasta in la wado baabuur iyo gaaska iyo dayactirka loogu talagalay gaariga.
Kuwani waa dhan talooyin kaliya inuu kaa caawiyo inaad si fiican u fahmaan wadista ee USA. None macluumaadkan waxaa loogu tala galay sida la-talin sharci. wax su'aalo ah oo ku saabsan wadista waa in lagu hagaajiyaa Xafiisyada gobolka DMV ama bilayska maxalliga ah.